BEXEL सफ्टवेयर - 3D, 4D, 5D र 6D BIM को लागि प्रभावशाली उपकरण - Geofumed
घर/पहिलो प्रभाव/BEXEL सफ्टवेयर - 3D, 4D, 5D र 6D BIM को लागि प्रभावशाली उपकरण
बेक्सेल प्रबन्धक BIM परियोजना व्यवस्थापनको लागि प्रमाणित IFC सफ्टवेयर हो, यसको इन्टरफेसमा यसले 3D, 4D, 5D र 6D वातावरणहरू एकीकृत गर्दछ। यसले डिजिटल कार्यप्रवाहहरूको स्वचालन र अनुकूलन प्रदान गर्दछ, जसको साथ तपाईंले परियोजनाको एकीकृत दृश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसको कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक प्रक्रियामा अधिकतम दक्षताको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ।
यस प्रणालीको साथ, कार्य टोलीमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिको लागि सूचनामा पहुँचको सम्भावना विविध हुन्छ। BEXEL मार्फत, मोडेलहरू, कागजातहरू, तालिकाहरू वा विधिहरू साझेदारी, परिमार्जन र प्रभावकारी रूपमा सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो सम्भव भएको छ यसको निर्माण SMART समन्वय दृश्य 2.0 प्रमाणीकरण, परियोजना सदस्यहरू र साझेदारहरू द्वारा प्रयोग गरिएका सबै विभिन्न प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्दै।
यसमा प्रत्येक आवश्यकताको लागि5समाधानहरूको पोर्टफोलियो छ। BEXEL प्रबन्धक लाइट, BEXEL इन्जिनियर, BEXEL प्रबन्धक, BEXEL CDE उद्यम र BEXEL सुविधा व्यवस्थापन। माथिका प्रत्येकको इजाजतपत्रको लागत तपाईंको आवश्यकता र परियोजना व्यवस्थापनको लागि वास्तवमा के आवश्यक छ अनुसार फरक हुन्छ।
तर BEXEL प्रबन्धकले कसरी काम गर्छ? यसको फाइदा लिनको लागि4धेरै विस्तृत र विशिष्ट कम्पोनेन्टहरू छन्:
3D BIM: जहाँ तपाईंसँग डाटा व्यवस्थापन मेनुमा पहुँच छ, प्याकेजहरूको तयारी क्ल्यास पत्ता लगाउने।
4D BIM: यो कम्पोनेन्टमा योजना, निर्माण सिमुलेशन, परियोजना अनुगमन, मूल योजनाको समीक्षा बनाम परियोजनाको हालको संस्करण उत्पन्न गर्न सम्भव छ।
5D BIM: लागत अनुमान र वित्तीय अनुमानहरू, 5D ढाँचामा परियोजना योजना, 5D परियोजना ट्र्याकिङ, स्रोत प्रवाह विश्लेषण।
थ्रीडी बिम: सुविधा व्यवस्थापन, कागजात व्यवस्थापन प्रणाली वा सम्पत्ति मोडेल डाटा।
सबैभन्दा पहिले, सफ्टवेयरको परीक्षण प्राप्त गर्नको लागि, कर्पोरेट खाता आवश्यक छ, यसले डोमेनहरू जस्तै Gmail, उदाहरणका लागि कुनै पनि इमेल ठेगाना स्वीकार गर्दैन। त्यसपछि आधिकारिक पृष्ठमा आवेदन दिनुहोस् BEXEL परीक्षण डेमो, जुन लिङ्क मार्फत र आवश्यक भएमा सक्रियता कोडको साथ आपूर्ति गरिनेछ। यो सबै प्रक्रिया व्यावहारिक रूपमा तत्काल छ, यो जानकारी प्राप्त गर्न लामो समय पर्खन आवश्यक छैन। स्थापना अत्यन्त सरल छ, केवल कार्यान्वयनयोग्य फाइलको चरणहरू पालना गर्नुहोस् र कार्यक्रम समाप्त भएपछि खुल्नेछ।
हामी सफ्टवेयर समीक्षालाई बिन्दुहरूद्वारा विभाजित गर्छौं जुन हामी तल वर्णन गर्नेछौं:
इन्टरफेस: प्रयोगकर्ता इन्टरफेस सरल छ, हेरफेर गर्न सजिलो छ, जब तपाइँ सुरु गर्नुहुन्छ तपाइँ एक दृश्य पाउनुहुनेछ जहाँ तपाइँ पहिले काम गरेको परियोजना पत्ता लगाउन वा नयाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा मुख्य बटन छ जहाँ नयाँ परियोजनाहरू महत्त्वपूर्ण र उत्पन्न हुन्छन्, र 8 मेनुहरू: व्यवस्थापन, चयन, टकराव पत्ता लगाउने, लागत, तालिका, दृश्य, सेटिङहरू र अनलाइन। त्यसपछि त्यहाँ जानकारी प्यानल छ जहाँ डाटा लोड हुन्छ (बिल्डिंग एक्सप्लोरर), मुख्य दृश्य जहाँ तपाइँ विभिन्न प्रकारका डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यसमा तालिका सम्पादक छ,
यस सफ्टवेयरको एउटा फाइदा यो हो कि यसले अन्य डिजाइन प्लेटफर्महरू जस्तै REVIT, ARCHICAD, वा Bentley Systems मा सिर्जना गरिएका मोडेलहरूलाई समर्थन गर्दछ। साथै, डाटालाई Power BI वा BCF प्रबन्धकमा निर्यात गर्नुहोस्। त्यसैले, यो एक अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म मानिन्छ। प्रणाली उपकरणहरू राम्ररी व्यवस्थित छन् ताकि प्रयोगकर्ताले तिनीहरूलाई सही समयमा फेला पार्न र प्रयोग गर्न सक्छ।
भवन अन्वेषक: यो कार्यक्रमको बायाँ छेउमा अवस्थित प्यानल हो, यसलाई4फरक मेनु वा ट्याबहरूमा विभाजित गरिएको छ (तत्वहरू, स्थानिय संरचना, प्रणालीहरू, र कार्यसेट संरचना)। तत्वहरूमा, मोडेल समावेश गरिएका सबै वर्गहरू, साथै परिवारहरू पनि अवलोकन गरिन्छ। वस्तुहरूको नामहरू प्रदर्शन गर्दा, कम्पनी, कोटी, वा तत्वको प्रकारको (_) नामसँग तिनीहरूलाई अलग गर्दा यसको विशेषता छ।
डाटा नामकरण कार्यक्रम भित्र जाँच गर्न सकिन्छ। कुनै पनि तत्व पत्ता लगाउन, प्यानलको नाममा मात्र डबल क्लिक गर्नुहोस् र दृश्यले तुरुन्तै स्थिति संकेत गर्नेछ। डाटाको प्रदर्शन पनि लेखकद्वारा तत्वहरू कसरी सिर्जना गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
बिल्डिङ एक्सप्लोररले के गर्छ?
ठिक छ, यो प्यानलको विचार प्रयोगकर्तालाई मोडेलको विस्तृत समीक्षा प्रस्ताव गर्नु हो, जसको साथ सबै सम्भावित दृश्य अशुद्धताहरू पहिचान गर्न सम्भव छ, बाहिरी वस्तुहरूको आन्तरिक वस्तुहरूको समीक्षाबाट सुरु गरेर। "वाक मोड" उपकरणको साथ तिनीहरूले संरचनाको भित्री भागहरू कल्पना गर्न सक्छन् र डिजाइनमा सबै प्रकारका "समस्याहरू" पहिचान गर्न सक्छन्।
मोडेल डाटा सिर्जना र समीक्षा: BEXEL मा उत्पन्न भएका मोडेलहरू 3D प्रकारका हुन्, जुन अन्य कुनै डिजाइन प्लेटफर्ममा सिर्जना गरिएको हुन सक्छ। BEXEL ले उच्च स्तरको कम्प्रेसनको साथ अलग-अलग फोल्डरहरूमा प्रत्येक मोडेलको सिर्जनालाई व्यवस्थित गर्दछ। BEXEL सँग, विश्लेषकले सबै प्रकारका दृश्यहरू र एनिमेसनहरू उत्पन्न गर्न सक्छ जुन अन्य प्रयोगकर्ताहरू वा प्रणालीहरूसँग स्थानान्तरण वा साझेदारी गर्न सकिन्छ। तपाइँ कुन परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर संकेत गर्दै परियोजना डेटा मर्ज वा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, त्रुटिहरूबाट बच्नको लागि र सबै तत्वहरूको नामहरू समन्वय गरिएको छ, यो कार्यक्रमले द्वन्द्व पत्ता लगाउने मोड्युल प्रदान गर्दछ जसले त्रुटिहरूबाट बच्न कुन तत्वहरू प्रमाणित गरिनुपर्छ भनेर देखाउनेछ। त्रुटिहरू निर्धारण गरेर, तपाइँ पहिले नै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ र परियोजना डिजाइनको प्रारम्भिक चरणहरूमा के आवश्यक छ सच्याउन सक्नुहुन्छ।
3D दृश्य र योजना दृश्य: यो सक्षम हुन्छ जब हामी कुनै पनि BIM डाटा परियोजना खोल्छौं, यसको साथ मोडेल सबै सम्भावित कोणहरूमा प्रदर्शित हुन्छ। 3D दृश्यको अतिरिक्त, 2D मोडेल प्रदर्शन, अर्टोग्राफिक दृश्य, 3D कलर कोडेड दृश्य, वा अर्टोग्राफिक कलर कोडेड दृश्य, र प्रोग्रामिङ दर्शक पनि प्रस्तावित छन्। अन्तिम दुई सक्रिय हुन्छन् जब 3D BIM मोडेल सिर्जना गरिन्छ।
योजना दृश्यहरू पनि उपयोगी हुन्छन् जब तपाईं धेरै विशिष्ट सुविधाहरू पहिचान गर्न चाहनुहुन्छ, वा मोडेल वा भवनको फ्लोरहरू बीच द्रुत रूपमा नेभिगेट गर्न चाहनुहुन्छ। 2D वा योजना दृश्य ट्याबमा, "वाक" मोड प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर प्रयोगकर्ता अझै पर्खाल र ढोका बीच नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ।
सामग्री र गुणहरू
सामग्री प्यालेट मुख्य दृश्यमा उपस्थित कुनै पनि तत्वलाई छोएर सक्रिय हुन्छ, यस प्यानल मार्फत, प्रत्येक तत्वमा उपस्थित सबै सामग्रीहरू विश्लेषण गर्न सकिन्छ। गुण प्यालेट पनि सामग्री प्यालेट जस्तै सक्रिय छ। चयन गरिएका तत्वहरूका सबै विशेषताहरू यसमा देखाइएका छन्, जहाँ सबै विश्लेषणात्मक गुणहरू, प्रतिबन्धहरू, वा आयामहरू नीलोमा देखिन्छन्। नयाँ गुणहरू थप्न सधैं सम्भव छ।
4D र 5D मोडेलहरूको सिर्जना:
4D र 5D मोडेल उत्पन्न गर्न सक्षम हुन प्रणालीको उन्नत प्रयोग हुन आवश्यक छ, तथापि, कार्यप्रवाहहरू मार्फत 4D/5D BIM मोडेल एकै साथ सिर्जना गरिनेछ। यो प्रक्रिया "सृष्टि टेम्प्लेट" नामक प्रकार्यता मार्फत एक साथ गरिन्छ। त्यसै गरी, BEXEL ले यस प्रकारको मोडेल सिर्जना गर्न परम्परागत तरिकाहरू प्रदान गर्दछ, तर यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ भने छिटो र प्रभावकारी रूपमा जानकारी सिर्जना गर्न, प्रणालीमा प्रोग्राम गरिएको कार्यप्रवाहहरू उपलब्ध छन्।
4D/5D मोडेल सिर्जना गर्न, निम्न चरणहरू छन्: लागत वर्गीकरण सिर्जना गर्नुहोस् वा अघिल्लो आयात गर्नुहोस्, लागत संस्करण स्वचालित रूपमा BEXEL मा उत्पन्न गर्नुहोस्, नयाँ खाली तालिकाहरू सिर्जना गर्नुहोस्, विधिहरू सिर्जना गर्नुहोस्, "सृष्टि टेम्प्लेटहरू" सिर्जना गर्नुहोस्, BEXEL सँग तालिका अनुकूलन गर्नुहोस्। सिर्जना विजार्ड, तालिका एनिमेसन समीक्षा गर्नुहोस्।
यी सबै चरणहरू कुनै पनि विश्लेषकका लागि व्यवस्थित छन् जसलाई विषयको बारेमा थाहा छ र जसले पहिले अन्य प्रणालीहरूमा यस्तो मोडेल सिर्जना गरेको छ।
रिपोर्ट र पात्रो: माथिका अतिरिक्त, BEXEL प्रबन्धकले परियोजना व्यवस्थापनको लागि Gantt चार्टहरू उत्पन्न गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। र BEXEL ले प्लेटफर्म भित्र वेब पोर्टल र मर्मत मोड्युल मार्फत रिपोर्टिङ प्रदान गर्दछ। यसले संकेत गर्दछ कि प्रणाली बाहिर र भित्र दुवै विश्लेषकसँग यी कागजातहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना छ, जस्तै गतिविधि रिपोर्टहरू।
थ्रीडी मोडेल: यो मोडेल एउटा डिजिटल जुम्ल्याहा "डिजिटल जुम्ल्याहा" हो जुन मोडेल गरिएको परियोजनाको BEXEL प्रबन्धक वातावरणमा उत्पन्न हुन्छ। यो जुम्ल्याहामा सबै परियोजना जानकारी, सबै प्रकारका सम्बन्धित कागजातहरू (प्रमाणीकरण, म्यानुअल, रेकर्डहरू) समावेश छन्। BEXEL मा 6D मोडेल सिर्जना गर्न केही चरणहरू पालना गर्नुपर्छ: चयन सेटहरू र लिङ्क कागजातहरू सिर्जना गर्नुहोस्, नयाँ गुणहरू सिर्जना गर्नुहोस्, कागजातहरू दर्ता गर्नुहोस् र कागजात प्यालेटमा तिनीहरूलाई पहिचान गर्नुहोस्, BIM मा लिङ्क डाटा, अनुबंध डेटा थप्नुहोस्, र रिपोर्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
अर्को फाइदा यो हो कि BEXEL प्रबन्धकले खुला एपीआई प्रदान गर्दछ जसको साथ विभिन्न प्रकारका कार्यक्षमताहरू पहुँच गर्न सकिन्छ र आवश्यक कुराहरू C# भाषाको साथ प्रोग्रामिंग मार्फत विकास गर्न सकिन्छ।
सत्य यो हो कि यो सम्भव छ कि डिजाइन क्षेत्र मा धेरै पेशेवरहरु जो BIM संसारमा डुबेका छन् यो उपकरण को अस्तित्व को बारे मा सचेत छैन, र यो भएको छ किनकी एउटै कम्पनीले तपाइँको परियोजनाहरु को लागी मात्र यो प्रणाली बनाएको छ। जे होस्, तिनीहरूले अब यो समाधान सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका छन्, धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छन् र पक्कै पनि, पहिले संकेत गरिए अनुसार, यसमा IFC प्रमाणीकरण छ।
छोटकरीमा, यो एक राक्षसी उपकरण हो - राम्रो तरिकामा - यद्यपि अरूले यो अत्यन्त परिष्कृत छ भनेर भन्नेछन्। BEXEL प्रबन्धक BIM परियोजना जीवनचक्र, क्लाउड-आधारित डाटाबेस, कागजात सम्बन्ध र व्यवस्थापन, 24-घण्टा निगरानी, ​​र अन्य BIM प्लेटफर्महरूसँग एकीकरणमा कार्यान्वयन गर्नको लागि उत्कृष्ट छ। तिनीहरूसँग BEXEL प्रबन्धक ह्यान्डल गर्ने बारे राम्रो कागजातहरू छन्, जुन यसलाई ह्यान्डल गर्न सुरु गर्दा अर्को मुख्य बिन्दु हो। यदि तपाइँ BIM डाटा व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट अनुभव लिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।